Cameron.....: January 2017
Posted by coral nyo at 23:32 No comments:
Hot Latte (Rosetta)
ဒီတစ်ခါတော့ Latte art အတွက် နို့ foam ရိုက်တာကို တရက်သင်ရတယ်...။ နို့ကို ရေနဲ့တစ်ဝက်ရောပြီး ခွက်ပေါင်းများစွာ စက်နဲ့ရိုက်ကျင့်ရတာ...။ နို့အမြှုပ်အသားက ညက်ပြီးဖြူဖွေးတောက်ပြောင်နေရတယ်...အဲဒါမှ ပုံဖော်လို့ကောင်းတဲ့ အဆင့်ကိုရတာ..။ ကမ္ဘာမှာ ဈေးအကြီးဆုံးနဲ့ အကောင်းဆုံးကော်ဖီလေးမျိုးရှိတယ် ...။ အဲဒါတွေကတော့..
1. Jamaica Blue Mountain
2. Hawaii Conna
3. Yemen mocha Matahari
4. Panama Geisha
ခုနောက်ပိုင်း အင်ဒိုကထွက်တဲ့ ကြောင်ချေးကော်ဖီစေ့ ကလည်း ဈေးကွက်ဝင်နေပါတယ်...။ ကော်ဖီစေ့ကျွေး ထားတဲ့ တာကြောင်နဲ့ ဆင်တို့ကရလာတဲ့ ကြောင်ချေးတို့ ဆင်ချေးတို့ကနေ ပြန်ယူပြီးလှော်ထားတဲ့ ကော်ဖီစေ့တဲ့..။
နို့ foam ရိုက်တာလေ့ကျင့်ပြီး နောက်နေ့ မီနူးသင်ရတယ်..။ အရိုးသားဆုံးပြောရရင် ကော်ဖီဆိုင်ထိုင်သာ ထိုင်ဖူးခဲ့တာ ခုသင်မှသာ ကော်ဖီမီနူးတွေကို စုံပလုံစေ့သိရတယ်..။ ကိုယ်တွေသိတာက espresso, latte, mocha, Americano လောက်ပဲမဟုတ်လား...။ တကယ့်ကော်ဖီအားလုံးရဲ့အခြေခံကတော့ espresso ပါပဲ..။ ဘာမီနူးကိုပဲဖျော်ဖျော် သူ့ကိုတော့ one shot, two shot ထည့်ရတယ်..။ green tea latte ကလွဲရင်ပေါ့..။
Espreeso Con Panna
ခွက်ပေါင်းမြောက်များစွာ ပုံဖော်ပြီးမှ ကြက်ကန်းတိုးပြီး ထွက်လာတဲ့ သစ်ခက်ပုံ
latte art သင်ရတဲ့နေ့ တော်တော်စိတ်ဓါတ်ကျမိတယ်..။ ဘယ်လိုလောင်းလောင်းပုံထွက်မလာဘူးလေ..။ ဆရာပြတာတော့ လွယ်နေတာပဲ..။ ယူကျုမှာကြည့်လည်းလွယ်တာပဲ...။ ကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်တော့ ခက်လိုက်တာလေ...။ အခြေခံသုံးမျိုးစသင်ရတယ် heart shape, rosetta နဲ့ tulip ပုံ..။ ကျန်တဲ့အရုပ်ပုံတွေက အသည်းပုံကနေအခြေခံပြီးဆွဲရတာ..။ နေပေ့စေဦး အိမ်မှာသေချာကျင့်လိုက်ဦးမယ် ...။ ပုံထွက်ရင် လာကြွားမယ်..။ နို့ foam ရိုက်တဲ့ hand blender ၀ယ်ထားတယ်..။
Posted by coral nyo at 00:29 1 comment:
မန်းသူတွေဘာကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကျွန်မလို့မပြောဘဲ ကျွန်တော်လို့ နာမ်စားသုံးသလဲဆိုတာ သေချာမသိပေမယ့်...ရွှေမန်းသူမဟုတ်တဲ့ ကျွန်မကတော့ စာရေးရင်သာ ကျွန်မလို့ရေးတတ်ပေမယ့် အပြင်မှာတော့ စကားပြောရင် ကျွန်တော်လို့ နာမ်စား သုံးလေ့ရှိတယ်..။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ခုနှစ်တန်းနှစ်တုန်းက မန္တလေး (၁၂)ကျောင်းမှာ တစ်နှစ်တက်ခဲ့ဖူးတုန်းကတည်းက ကိုယ့်ကိုယ်ကို “ကျွန်တော်”လို့ နှုတ်ဆွဲသွားခဲ့တာ ခုထိပဲဆိုပါတော့..။
မန္တလေးမှာ တစ်နှစ်နီးပါလောက်ပဲနေလိုက်ရပေမယ့် ကျွန်မရဲ့ ငယ်ဘ၀တပိုင်းတစတွေ အဲဒီမြို့မှာ ထင်ကျန်နေခဲ့ဖူးတယ်....။ ကျွန်မ မန္တလေးမြို့ကိုချစ်တယ် အဲဒီမှာနေရတာမစိမ်းဘူး ပျော်လည်းပျော်တယ်..။ ကျွန်မက အစားသမားဆိုတော့ မန်းရဲ့ ဒေသအစားအစာတွေ အကုန်လုံးကိုကြိုက်တယ်...။ ကျွန်မအဲဒီတုန်းက ခုနှစ်တန်းတက်ပြီး အရေးခင်းဖြစ်လို့ ကျောင်းပိတ်လိုက်ရတာ..။ မန်းမှာ စက်ဘီးစီးပြီး လျှောက်သွားရတာ သိပ်ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်..။ အရေးခင်းချိန်တုန်းကဆို ညနေပိုင်းမှာ မကြောက်မရွံ့ စက်ဘီးစီးပြီး နံရံကပ်စာတွေ ကာတွန်းတွေသွားသွားဖတ်ကြတာ..။ အဲဒီက ညီမတစ်ဝမ်းကွဲတွေနဲ့ ကဲကဲတွေပေါ့..။ အဲဒီခေတ်က ခုခေတ်လို စီဒီတွေဘာတွေမရှိသေးဘူး သီချင်းနားထောင်ချင်ရင် ဒေါင်းလုတ်တာတွေဘာတွေမရှိသေးတော့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့သီချင်းကို တန်းစီပြီးချရေး ကက်ဆက်ခွေငှားဆိုင်မှာ လက်ရွေးစင်သွားကူး အဲလိုလုပ်ရတာ..။ များသောအားဖြင့် ကက်ဆက်ခွေအငှားဆိုင်နဲ့ စာအုပ်ငှားဆိုင်က တွဲထားတတ်တယ်..။ ဆိုတော့ ကာတွန်းစာအုပ်တွေ ၀တ္ထုစာအုပ်တွေငှားဖတ် ညနေပိုင်းဆို ဗီဒီယိုခွေတွေငှားကြည့် ...။ ကိုယ်သွားချင်တဲ့နေရာ စက်ဘီးလေးနင်းပြီးသွားရတာ သဘောကျတယ်...။
ကျွန်မတို့နေတာက ဗထူးကွင်းနဲ့နီးတယ် ၂၈x၂၉ လမ်းကြားက မေတ္တာလမ်းသွယ်ထဲမှာ ၂၈လမ်းဒေါင့်က မင်းသီဟလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရှိတယ် ..။ အစားအသောက်သိပ်ကောင်းပဲ..။ လက်ဖက်ရည် ပဲပလာတာ မုန့်တီသုပ်(နန်းကြီးသုပ်) ပဲအီကြာ...အကုန်ကောင်းတာ..။ မန်းက ပဲပြုတ်ကိုပိုကြိုတယ်ဆိုတာ ရန်ကုန်လို ပဲလုံးလေးတွေက သေးသေးညိုညိုတွေမဟုတ်ဘူး ပဲလုံးကြီးကြီး အညိုဖျော့ဖျော့နဲ့ အရသာကလဲ ချိုနေရော..။ အီကြာကွေးတစ်ချောင်းဆိုလည်း လူ့တတောင်ဆစ်လောက်ရှိတယ်..။ မင်းသီဟက ခုချိန်ထိ နာမည်ရတုန်းပါပဲ..။ ရှမ်းခေါက်ဆွဲစားချင်ရင်တော့ မိန်းလမ်းပေါ်က နေခြည်ရှမ်းခေါက်ဆွဲဆိုင်ကောင်းတယ် အဲဒီခေတ်ကပေါ့ ခုတော့ အဲဆိုင်ရှိသေးလားမသိဘူး...။ ဂျုံဆီချက်ခေါက်ဆွဲ၊ ဆန်ပြားသုပ်၊ ရှမ်းသုပ်၊ ဆန်စီး၊ မြီးရှည် အကုန်ကောင်း..။ ရေးရင်နဲ့ စားတောင်စားချင်လာပြီ...။ “ကျွန်တော်”လို့ခေါင်းစဉ်တပ် အကြောင်းပြပြီး အစားအသောက်အကြောင်း များများရေးပါရစေ..။
နောက်ပြီး ၂၇လမ်းပေါ်က ဘယ်လမ်းနဲ့ ဘယ်လမ်းကြားလည်းတော့မသိတော့ဘူး... အရင်မန္တလာဟိုတယ် နောက်ကျော်က အထမ်းနဲ့ရောင်းတဲ့ ရခိုင်မုန့်တီနဲ့ မကျည်းဖျော်ရည်လည်းကောင်းတယ်..။ ရခိုင်မုန့်တီကို ငုံးဥထည့်ရောင်းတာ အဲဒီတစ်သည်ပဲမြင်ဖူးသေးတယ်...။ ရှူးရှူးရှဲရှဲနဲ့ပြီးရင် အစပ်ပြေ မကျည်းဖျော်ရည် ထန်းလျက်နံ့မွှေးမွှေးအေးအေးလေး တစ်ခွက်သောက်လိုက် လုံးဝအငြိမ်းကောင်းတာ...။ ပြီးတော့ မန်းမြီးရှည်ဆို ခု ၁၆လမ်းက အထမ်းမြီးရှည်လောက်ပဲသိကြတာ ..။ တကယ်တမ်း ကျွန်မတို့ငယ်ငယ်က ဗထူးကွင်းရှေ့နားက မြီးရှည်ဆိုင်ဆိုတကယ်စားကောင်းတာ..။ မီးခိုးကြောင့်မဲနက်နေတဲ့ မြေအိုးကြီးကြီးနဲ့ ၀က်ဒူးရိုးကြီးတွေကို မီးအေးအေးနဲ့ တနေကုန်သည်ထားပြီးချိုနေတဲ့ ၀က်ရိုးပြုတ်ရည်နဲ့ ပဲငပိနံ့သင်းတဲ့ မြီးရှည်သုပ်က တကယ့်စပယ်ရှယ်...။ အခု ရန်ကုန်မှာဆို Feel ဆိုင်တွေမှာ အထမ်းမြီးရှည်ဆိုပြီး မီနူးထဲမှာပါတယ်..။ ဒါပေမယ့် မန်းကရောင်းတာနဲ့တော့ အရသာက ဘာမှမဆိုင်ဘူး..။ လောလောလတ်လတ်တော့ မန်းမှာ ၁၆လမ်းက မြီးရှည်တော့ နာမည်ရဆဲဆိုင် လမ်းဘေးဆိုင်ပဲ ခုံပုလေးတွေနဲ့ထိုင်စားရတယ်။ ၀က်မြီးကြိုက်ရင် ညှပ်ထည့်ပေးတယ် ဒညင်းသီးပြုတ်လည်းထည့်တယ် ၂၀၀၉ မန်းရောက်တုန်းကတော့ သွားစားဖြစ်သေးတယ်...။
မန္တလေးရောက်ရင် မုန့်တီကိုပဲ လူတွေက အာရုံစိုက်ကြတာ တကယ်တမ်း မန်းက မုန့်ဟင်းခါးလည်းကောင်းတယ်..။ ငါးပေါတဲ့အရပ်မဟုတ်ပေမယ့် ငယ်ငယ်တုန်းက ၂၇လမ်း နဲ့ ၇၅လမ်းနားလောက်က ဒေါ်ကြည်မုန့်ဟင်းခါးအရမ်းကောင်းတယ် ညနေပိုင်းဆို စက်ဘီးလေးနဲ့ ပါဆယ်သွားသွားဆွဲတာ မုန့်ဖတ်မျှင်လေးကသေးသေးလေးနဲ့ ပဲကြော် ဗူးသီးကြော် မန်းကြော်တို့ကအစ အကုန်ကောင်းတယ်...။ ကျွန်မတို့အဒေါ်အိမ်ရဲ့ လမ်းထိပ် ဗထူးကွင်းနားက အကြော်တဲလေးမှာလည်း မနက်ဆို အကြော်စုံနဲ့ကောက်ညှင်းပေါင်းရတယ်...။ မန်းမှာမသိမဖြစ်တစ်ခုရှိသေးတယ် မစားမဖြစ် မန်းအချဉ်ပေါင်း...။ မောင်းထုပြီး လှည်းတွန်းသည်လာပြီဆို အချဉ်ပေါင်းမျိုးစုံကို ငါးပိ ငံပြာရည် ပုစွန်ခြောက်မှုန့် ငရုတ်သီးမှုန့်စပ်ထားတာလေးနဲ့ ရောနယ်ထားတာ သိပ်ကောင်းပဲ။ ရေးရင်း သရေတောင်ကျတယ်...။ ငရုတ်သီးမှုန့်ငံပြာရည်ဆိုမှာ မန်းမှာ ငါးပိရည်ကျိုအစား ထမင်းစားတိုင်းအမြဲပါတတ်တာကတော့ ငရုတ်သီးမှုန့်ငံပြာရည်ဖျော်ခွက်ပါပဲ...။ အဲဒါလေးနဲ့ထမင်းနဲ့နယ်ပြီး ၀က်ချိုပေါင်းလေးနဲ့စားပါလေ့ ထမင်းမမြိန်ရင် ကြိုက်တာပြော...။
အခုဆိုတော့ ရှမ်းအစားစာနဲ့ တရုတ်အစားစာများလွှမ်းမိုးခြင်းကို ခံလိုက်ရသော မန်းမြို့ရွှေပြည်ဖြစ်သွားပေမယ့် ဒေသအစားအစာ မြီးရှည်နဲ့ မုန့်တီကတော့ မကွယ်ပျောက်သေးလို့ တော်ပါသေးတယ်..။ ပုံတွေနဲ့တကွပြချင်တာ ခုက ကိုယ့်ဘာသာ စားချင်တာ စိတ်ကူးနဲ့ရေးရတာမို့ ပုံမပြနိုင်...။ မန္တလေးက စားချင်တဲ့ အစားစာများကိုတန်းစီပြောပါဆိုရင် ....
၅။ မင်းသီဟလက်ဖက်ရည်ဆိုင်က အစားစာများ
၆။ ဈေးချိုနားက ညဖက်ရောင်းတဲ့ တရုတ်ထမင်းပေါင်း
၇။ တရုတ်တန်းစေျးနားက မတင့်ဖက်ထုပ်ကြော်
၈။ မန္တလေးက အိမ်ချက်ထမင်းဟင်းနဲ့ ငရုတ်သီးငံပြာရည်ဖျော်
၇။ ထန်းလျက်နဲ့ခေါက်စားရတဲ့ သီးသီး
၉။ ဦးပိန်တံတား မယ်ဇလီပင်အောက်က ပြောင်းဖူးကြော်နဲ့ ဆီထမင်း ဆတ်သားခြောက်ဖုတ်
၁၀။ ဈေးချိုက ငှက်ပျော်အုန်းနို့ပေါင်း
ဒါက ငယ်ငယ်တုန်းက တစ်နှစ်နီးပါးနေခဲ့ဖူးတဲ့ အစားအသောက်အတွေ့အကြုံတွေ...။ ကျောင်းပြီးတော့ မန်းဘူတာကြီးနားက ဆိုင်ခန်းမှာ ဖက်ရှင်ဆိုင်ဖွင့်တုန်းကလည်း မန်းမြို့တခွင်ပြဲပြဲစင်အောင် ချောင်ကျိုချောင်ကြားတွေ အကုန်ရောက်တယ်...။ မန်းက လူသိပ်မသိသေးတဲ့ တောင်ပေါ်က ဟသာင်္ဂူဘုရားတို့ဘာတို့ဖက်ကို အစုံသွားတယ်..။ စစ်ကိုင်း မုံရွာဆို တွင်းတောင်းအိုင်ထိရောက်ဖူးခဲ့တယ်...။ ပြင်ဦးလွင်ဆိုလည်း အခု ရေပြာအိုင်ကတော့ အဲတုန်းကမတွေ့သေးလို့ ကျန်တဲ့ ရေတံခွန်တွေ ဘုရားတွေ ဂူတွေအကုန်သွားခဲ့ဖူးတယ်...။
တကယ်တော့ ကျွန်မက “ ကျွန်တော် ကျွန်တော် ” နဲ့ပဲ နာမ်စားသုံးပြီး စကားပြောတတ်တယ်ဆိုတာကို အကြောင်းပြပြီးရေးရင်းက အစားအသောက်ပို့စ်တစ်ခုဖြစ်သွားပါကြောင်း....း))
Posted by coral nyo at 00:30 1 comment:
2017 ရဲ့ ပထမဦးဆုံးနေ့ မနက်(၉)နာရီအချိန်မှာ ကော်ဖီသင်တန်းရဲ့ ပထမဆုံးသင်ခန်းစာကိုစတက်ရပါတယ်..။ ပထမဆုံးတစ်ရက်မှာပဲ အိမ်ပြန်မရောက်ခင် လမ်းမှာပဲ ကျွန်မငိုရပါတယ်...။ ငိုတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အားမရလို့ပါ...။ ကော်ဖီတစ်ခွက်ဖျော်တာ ဒီလောက်တောင်ခက်လားလို့ ကျွန်မခုမှလက်တွေ့သိရတော့တယ်...။ ကျွန်မတို့ အရင်က ကော်ဖီဆိုင်တစ်ဆိုင်ထိုင်ရင် မီနူးကြည့်လိုက်လို့ တစ်ခွက်ကို သုံးထောင် သုံးထောင်ငါးရာလောက်ကျရင် တော်တော်ဈေးကြီးနေပြီ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ကော်ဖီတွေဘာတွေကို မရွေးနေတော့ဘဲ ဈေးနှုန်းကိုပဲ အဓိကရွေးပြီး ဈေးပေါတာ မှာသောက်တတ်ကြတယ်..။ တကယ်တမ်း ကော်ဖီတစ်ခွက်ကို ကိုယ်တိုင်ဖျော်ရတဲ့အခါ အရသာကောင်းမွန်ပြီး balance ညီမျှတဲ့ ကော်ဖီတစ်ခွက် ထွက်လာဖို့ ဘယ်လောက်ခက်ခဲလိုက်သလဲဆိုတာ ခုမှနားလည်သွားတော့တယ်...။ Espresso ဆိုတာ ကော်ဖီအားလုံးရဲ့ အခြေခံဆိုတာကိုလည်း သိခဲ့ရတယ်...။ ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရဲ့ ကော်ဖီကောင်း မကောင်းကို သိချင်ရင် Espresso တစ်ခွက် အရင်မှာသောက်ပါတဲ့..။
ကော်ဖီမှာ ကျွန်မတို့က ခါးတဲ့ အရသာရှိတယ်လို့ပဲ အကြမ်းသိကြတာ...။ တကယ်တော့ ကော်ဖီရဲ့ အရသာက အမျိုးပေါင်းကိုးဆယ်ကျော်လောက်ရှိတယ်..။ အဓိကမှတ်ထားရတာကတော့ ချို ချဉ် ဖန် စပ် ခါး ..။
ကော်ဖီစေ့တွေကို လှော်ရတဲ့ အဆင့်လိုက်ကို ကိုးမျိုးရှိတယ်..။ ကျွန်မတို့ ပထမဆုံး စာတွေ့သင်နေချိန်မှာပဲ အဲဒီကော်ဖီနာမည်တွေကိုစီထားတဲ့ ပုလင်းတွေကို နှစ်ခါလောက်ကြည့်ပြီး အလွတ်ပြောရတယ်...။ Light, Cinnamon, Medium, high, City, Full City, France and Italian တို့ပဲဖြစ်တယ်...။ ကော်ဖီဆိုင်တွေမှာ အသုံးများတာကတော့ City သို့မဟုတ် Full City အဆင့်မှာလှော်ထားတဲ့ ကော်ဖီစေ့တွေပဲဖြစ်တယ်။ Italian ကတော့အခါးဆုံးဖြစ်သွားပြီ..။ နိုင်ငံခြားသားတွေလောက်ပဲ သောက်နိုင်တော့မှာ..။
ကော်ဖီသီးကိုစတွေ့တာက အီသီယိုးပီးယားမှာ ဆိတ်ကျောင်းသားလေးတစ်ယောက်က စတွေ့တာ..။ ကော်ဖီသီးကို Cherryသီးလို့ခေါ်တယ်...။ အထဲက အစေ့ကို ထုတ်လိုက်ရင်တော့ green bean လို့ခေါ်ပြီး လှော်ပြီးမှသာ coffee bean လို့ခေါ်ပါတယ်..။ ကော်ဖီကို ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ပေ 3000 ကနေ 6000 ကြားမှာပေါက်တဲ့ အပင်ကို Arabia coffee လို့ခေါ်ပြီး တောင်အောက်မှာပေါက်တာကိုတော့ Robusta လို့ခေါ်တယ်...။
တောင်ပေါ်မှာပေါက်တဲ့ ကော်ဖီတွေက အဲလိုလေး အခြမ်းနှစ်ခြမ်းပါတယ်
ဒါကတော့ အလုံးလိုက်လေးတစ်လုံးတည်းပါတဲ့ တောင်အောက်ကကော်ဖီစေ့
အရသာ balance ညီမျှတဲ့ ကော်ဖီဖြစ်ဖို့ ကော်ဖီစေ့အမျိုးပေါင်း(၈)မျိုးလောက်ကိုရွေးချယ်ရောစပ်ပြီး ထုတ်ထားတဲ့ ကော်ဖီ Catunambu ဆိုတာ European products ....။ စပိန်မှာ ထုတ်လုပ်တဲ့ ကော်ဖီ...။ ကျွန်မတို့ သင်တန်းမှာ အဲကော်ဖီသုံးတယ် ..။ တစ်ကီလို တစ်ထုပ်ကို မြန်မာငွေကျပ် သုံးသောင်းခွဲလောက် ကျတယ်..။
ကော်ဖီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဗဟုသုတတွေကိုပထမ တစ်နာရီမှာသင်တယ်...။ ကော်ဖီစက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဖိအားတွေ အပူချိန်တွေ ဘယ်လိုချိန်ရတယ်ဆိုတာတွေ ကော်ဖီစက်ကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်တာတွေ သင်တယ်...။ နောက်နှစ်နာရီကို ကော်ဖီကြိတ်တာနဲ့ one short, two short(double short) အချိန်အဆကို လက်မှန်းနဲ့မှန်အောင်လေ့ကျင့်ရတယ်..။ two short ဆိုတာ ကော်ဖီစက်ကနေ ခွက်နှစ်ခွက်စာ အရည်လေးကျလာတာကိုပြောတာပါ..။ two short မှာ ကော်ဖီမှုန့်အလေးချိန်က 14 g ကနေ 20 g အတွင်းရှိရပါမယ်...။ အကောင်းဆုံးကတော့ 16g မှာရှိနေရမယ်..။ အဲဒီကော်ဖီကို ညီနေအောင် ဖိတုံးလေးနဲ့ ဖိရပါသေးတယ်....။ ဒါတင်မပြီးသေးဘူး အဲဒါကော်ဖီကို စက်မှာတပ်ပြီး ရေဖိအားချလိုက်ရင် 25စက္ကန့် အတွင်းမှာပဲ ကော်ဖီက 30ml ကျရမယ် ကော်ဖီကြိတ်တာကြမ်းနေရင်လည်း အရသာမကောင်းသလို အရမ်းမှုန့်သွားရင်လည်း ကော်ဖီရေကျတာ နှေးသွားတဲ့အတွက် ဆိုလိုတာက 25စက္ကန့် အတွင်းမှာ 30ml မကျနိုင်တော့တဲ့အတွက် ကော်ဖီကောင်းတစ်ခွက်မထွက်ပါဘူး..။ ဖိတုံးဖိတာ မညီရင်လည်း စက်မှာတပ်ရင် ကော်ဖီအကျရေမမှန်ပါဘူး..။
ဒါကြောင့် ကော်ဖီကြိတ်တာရော ကော်ဖီဖျော်တဲ့စက်ကိုရော အချိန်တိုင်းစောင့်ကြည့်ပြီး ကိုယ်လိုချင်တဲ့အနေအထားရောက်အောင် အမြဲချိန်နေရမှာပါ..။ ကော်ဖီကြိတ်မယ်ဆိုရင်လည်း စက်ရဲ့ ဘယ်နံပါတ်မှာထားရင် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အမှုန့်အနေအထားရမယ်ဆိုတာမျိုး...။ ကော်ဖီဖျော်စက်ဆိုရင်လည်း ဘယ်ဖိအား ဘယ်အပူချိန်လောက်မှာ ကော်ဖီကျတဲ့အခါ အရသာကောင်းမယ်ဆိုတာမျိုးတွေပါ...။ သုံးမိနစ်အတွင်းမှာ စားသုံးသူဆီကို ကော်ဖီတစ်ခွက် အပြီးချပေးနိုင်ဖို့ ကော်ဖီမှုန့်စထည့်ပြီး စက်ထဲကနေ ကော်ဖီအကျရေကို ခွက်နဲ့ခံပြီး အပြီးဖျော်ရတာ အစအဆုံးအားလုံး မှန်နေမှ ကော်ဖီကောင်း တစ်ခွက်ရမှာပါ..။ မုန့်တစ်လုံးဖုတ်တာထက် အစများစွာခက်ပါတယ်...။ ဒါကြောင့် ကော်ဖီကောင်းတစ်ခွက် ရဖို့ ဖျော်တဲ့သူရဲ့ စိတ်ထားနဲ့ နှလုံးသားနဲ့ အများကြီးသက်ဆိုင်သွားပါပြီ..။ သူ့စိတ်တည်ငြိမ်နေမှ နှလုံးသားအရင်းခံနဲ့စေတနာထားပြီး ဖျော်မှသာ
ကော်ဖီကောင်းကောင်း တစ်ခွက်ထွက်လာမှာပါ..။ ကျွန်မအခုပြောပြတာက ကော်ဖီဖျော်နည်းရဲ့ အခြေခံလေးပဲရှိပါသေးတယ်..။ နောက်နေ့တွေကျရင် နို့ကို Foam ဖြစ်အောင်ရိုက်နည်းတွေသင်ရမယ်..။ အဲဒါတွေရမှ ကျန်တဲ့ မီနူးတွေကိုဆက်သွားရမှာ..။ သင်တန်းချိန်ကို Practice လုပ်နိုင်ဖို့ တစ်နာရီကြိုပြီးလာရမယ်လို့ ဆရာကမှာထားတယ်..။
Posted by coral nyo at 02:23 1 comment:
Posted by coral nyo at 21:45 1 comment:
ကျွန်မ ဘလော့ရေးတဲ့ သက်တမ်းတလျှောက်မှာ နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့အစ ဇန်န၀ါရီ(၁)ရက်နေ့ နှစ်သစ် အကြို နှုတ်ဆက်စကားနဲ့ပတ်သက်လို့ ပို့စ်တစ်ခါမှမရေးခဲ့ဖူးဘူး...။ ဒီနှစ်တော့ နှစ်သစ်နှုတ်ခွန်း စကားလေး ပြောပါရစေ..။ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ သက်ရှိထင်ရှား သတ္တ၀ါအားလုံး ကျန်းမာချမ်းသာလို့ ငြိမ်းချမ်းပျော်ရွှင်ကြပါစေ...နှစ်သစ်မှစပြီး အစစအရာရာ အောင်မြင်အဆင်ပြေကြပါစေလို့ မင်္ဂလာနှုတ်ဆက်စကားလေးပြောချင်ပါတယ်...။
2017 ရဲ့ ပထမဆုံးရက်မှာ ကျွန်မစလုပ်ရတာက ကော်ဖီသင်တန်းစတက်ခြင်းပါပဲ...။ ဒီအတွက် ကျွန်မရဲ့ နှစ်သစ်အစဟာ ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်နဲ့စရလို့ မင်္ဂလာရှိပြီးရင်းရှိနေပါပြီ..။ ပြီးတော့ နောက်လတွေ ကျရင်လည်း ဆက်တိုက် နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်တွေရှိနေတော့ ကျွန်မအတွက် 2017ဟာ ခရီးသွားနှစ်လို့လည်း ဆိုလို့ရနိုင်ပါတယ်..။ အားလုံး မင်္ဂလာရှိသောနှစ်သစ်လေးပါ...း) ပုံလေးကတော့ တခါက ဘလော့ဂါဟောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကိုဖြိုးမောင်မောင်ရဲ့ လက်ရာပါ...။
Posted by coral nyo at 00:13 1 comment: